Ngaba iwotshi yeapile ihlala ikhona embonisweni?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba iApple Bukela i-SE ihlala iboniswa?
Ngaba iApple Bukela i-SE ihlala iboniswa?
Inkqubo ye- iiwotshi zakutshanje zeApple Ngoku iyafumaneka , kwaye ngelixa Uthotho lweeNqaku 6 iza neprosesa entsha engumbini weS6, a isivamvo oksijini yegazi , Ukubeka iliso kwi-ECG, iteknoloji ye-widebandband , kunye noHlelo lwesiQendu 5 & iiapos zihlala ziboniswa, iiWatch SE azinazo ezi mpawu.
Endaweni yokuba inikwe amandla Uthotho 5 & apos; s I-chip ye-S5 kwaye yabelana kuphela ngezinto ezibalulekileyo kuthotho lwe-6, njenge-accelerometer, i-gyroscope, i-altimeter ehlala ikho, ukubonwa kokuwa, ukulandelela ukulala, kunye ne-SOS engxamisekileyo. Zombini iiwotshi ezintsha zinesikrini kunye nesisombululo esifanayo, kwaye zikwanjalo iyawakhaba amanzi .
Ukubukela SE kuyaqhuba iwotsOS 7 kwaye iyahambelana nazo zonke iibhendi ze-Apple Watch, kubandakanya iSolo entsha kunye neLoed Braved.
Ukuqala kwi- $ 279, i-Watch SE ibiza kakhulu kune-Series 6 ebiza i-399 yeedola kuqwalaselo lwesiseko.
Kutheni le nto iiApple Watch SE zingasoloko ziboniswa?
Isoloko iboniswa yenye ye Uthotho 5 kunye neempawu zemarquee kwaye inyani yokuba i & apos ilahlekile kwimodeli efikelelekayo inokuba sisaphuli-mthetho kubathengi abanokubakho.
Kule ndlela, ixesha lihlala libonakala, kunye neyona app yamva nje esebenzayo kunye nokubukela ubuso.
Uthotho lwesi-5, 6, kunye ne-SE zonke zinomboniso we-LTPO, onganikeli kuphela inqanaba lokuhlaziya kodwa ekwenza ukuba kusoloko kukwimo enokwenzeka. Oku kwenza ukuba umntu azibuze ukuba ingaba i-Watch SE iyakwazi ukusebenza, kwaye ukuba ngaba iApple iyakwenza ukuba ngenye imini ihlaziye isoftware.
Ukuqikelela ukuba abafuni ukongeza iindleko zokujikeleza okujikelezayo ...
-Ross Omncinci (@DSCCRoss) NgoSeptemba 18, 2020
Ngokwe-insider yokuthenga ngaphakathi u-Ross Young, ukongeza imowudi kwi-Watch SE bekuya kukhokelela ekunyukeni kweendleko, into enokuthi yoyise injongo yemodeli ye-SE.
Iyavakala, kwaye ukuba uzimisele ukujonga ngaphaya kwento engekhoyo, iWatch SE inokuba yeyona ndlela ifanelekileyo ukuba awufuni kukhutshwa kuluhlu lweWatch 6.
Umhla wokukhutshwa kwe-iphone x 2018
galaxy bukela lte vs ibluetooth
Ukukhubaza i-5G kwi-Verizon iPhone yakho entsha kunokuyenza ngokukhawuleza
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy S5 kunye ne-LG G2
Uyisebenzisa kanjani iBrew ukufaka iJava kwiMac
I-5 yezonaapps zilungileyo ze-Android zekhamera yesantya kunye nezilumkiso zengozi yendlela
I-AT & T ine-Apple iPhone 6s ye- $ 99.99 ($ ​​100 icinyiwe) kubathengi abahlawulwa kwangaphambili; iimeko ziyasebenza
Ukuseta iiNtloko eziPhindaphindiweyo kwisicelo seHTTP ngeKarate
Abalandeli beFortnite beba ulusu lweGlass kwiiyunithi zeedemo zeNqaku 9, kwaye iSamsung ayichukumiseki
IJava Bhala kwimizekelo yeFayile